AMISOM oo Dishay dad Rayid ah – Radio Daljir
Diseembar 19, 2015 4:04 b 0
Somalia, December 19, 2015-(Daljir)_ Ciidamada AMISOM ayaa shalay galab ay sheegeen dadka deegaanka Goolweyn oo ka tirsan gobolka Sh/hoose inay dadka Raydi ah dileen kadib markii gaari saarnayeen Kolonyao ka tirsan AMISOM qaraxa lala eegtay.
Kolanyo gaadiidka ee la qaraxa lala eegtay waxaa la socday Gudoomiyaha Degmada Baraawe waxaana la sheegay in qaraxu ahaa Ismiidaamin.
Mid kamid ah dadka deegaanka Goolweyn oo la hadlay Puntland Today ayaa sheegay in Ciidamada AMISOM ay dileen Afar qof oo Rayid ah, Waxaa uu sheegay in mid kamid ah uu ahaa qof laga yaqaan deegaanka isagoo ku shaqaysan jiray gaari dameer.
Sanadkii hore Ciidamada AMISOM ayaa todobon qof ku dilay degmada Marka,Taliyayaasha AMISOM ayaana raali galin ka bixiyey dilkaas, iyagoo sheegay dilka dadkaas in loo xiray Askar.
Booliska England oo Helay mid kamid ah Gabdho la Baadi-goobayay